Ukukhulekela eSontweni Lobu-Orthodox kuthinta zonke izinzwa: izithonjana ngalo mbono, lapho kuculwa ngamaphimbo nalapho wesifundvo sekuvisisa, ashise impepho e-lokuhogela, nokudla isinkwa esingcwele, izindawo zokukhulekela izithombe namathempeli ukunambitha. Konke lokhu kubalulekile, konke okubalulekile. Ethempelini, ekukhulekeleni, abantu baphile ukuphila ngokugcwele. Izikhungo esontweni kuqhubeka umjikelezo wansuku zonke, masonto onke futhi yonyaka.
Umuntu ongeyena ujwayelene iSonto Lobu-Orthodox, isevisi ibonakala okuyisidina, ngempela okufanayo. Kodwa umehluko ngokuqinisekile lapho.
inkonzo ngasinye siqukethe njalo futhi kwenombolo ingxenye. emaculweni ezingenakuguquleka - kuba, isibonelo, Cherubic Hymn kuwo wonke Inkonzo. Kuzwakala ngaso yonke isevisi (ngaphandle izikhathi ezimbalwa ngonyaka) futhi uhlala ingashintshiwe. Cherubic wabhala ezinye abaqambi kanye nemisebenzi yabo nazo ngezinye izikhathi kwenziwe. Kodwa lokhu isixazululo ngokuvamile uthatha ibamba of ekwayeni, it is hhayi kulawulwa Charter: ukucula khona namuhla Cherubic Gretchaninov, Tchaikovsky noma nje sithi abanye Izigodlo.
Cishe bonke iculo Isonto, okuyinto eyenziwa futhi aziwa - kungcono ingxenye enjalo unomphela yokukhulekela. Izinguquko njalo acabangele:
usuku lwesonto (njalo usuku lwesonto - inkumbulo nemicimbi ekhethekile);
Inombolo (imemori yabangcwele ukudla nsuku zonke);
ukutholakala yokuHlawula, manje noma esikhathini esizayo esiseduze (kuhlanganise 4 amaviki belungiselela yokuHlawula, Easter "Izilawuli" ngoba cishe izinyanga eziyisithupha).
Motets ngesineke nsukuzonke ngokwesimiso. Lakwentako ke uhlangabezane ibamba, umuntu ngemfundo ekhethekile. Ngokugcwele inkonzo kuyafana unyaka wonke kanye kuphela eminyakeni 518. Okungukuthi, ngisho noma uya zonke izinkonzo, emaculweni ngeke okuphindaphindiwe ngeke kabili nse kuwo wonke ukuphila izizukulwane kweshumi. Kodwa-ke, kutfotjelwa zonke articles of association kakhulu isikhathi, lokhu kungenzeka kuphela izindela zesilisa nokuhlala emhlabeni, abantu ngeke ukusekela inkonzo enjalo isikhathi eside.
Amanothi Motets ihlukaniswe amazwi eziyisishiyagalombili. Izwi - kungcono nje ihubo, umculo, okuyinto basuke ezihlatshelelwa troparion kosuku. Voices enye masonto onke: ephindwa cishe njalo emavikini nelesithupha.
It is hhayi njalo kukuliphi ethize angakwazi ukukhokhela sekungena langa. Esikhathini emaphakathi Imikhandlu wedolobha bavame ukuhlabelela singers professional futhi namasonto amancane emaphethelweni ibandla ngokuvamile kancane ujwayelene notation emculweni. ukucula Professional ngokuqinisekile ngaphezulu sibambe ongezansi, kodwa ngokuvamile lezi singers - abangakholwa, kodwa Motets - umthandazo.
Yini ebaluleke kakhulu: amazwi amahle ekhwayeni noma ngoma bethandaza - ukunquma li. Muva nje, kwakukhona ngisho emaculweni imfashini. umsakazo wabo, lwenziwa amahholo Philharmonic kanye Staatskapelle, ukuqopha zingathengwa.
Awu, lokho art kobufundisi edonsela abantu, kodwa ukulalela lawa marekhodi ngokuvamile ngempela nemolitvennym ezingabalulekile. Kodwa emaculweni izikhathi obuseduze kakhulu yokukhulekela. Yini ukuba yenzeni ngako churched umuntu: ukuthandaza noma ujabulele amazwi? Noma khumbula ukuthi lesi akusona inkonzo nhlobo, futhi konke okwenzekayo kuleli hholo futhi amakhonsathi - kuphela umculo, kodwa hhayi komthandazo? Ngakho-ke, akubona bonke amaKristu obu-Orthodox khona lezi amakhonsathi nabo bonke abalandeli yalesi ubuciko.
Inkonzo - kuyinto ... Iyini Nowaphezulu
Ingabe kungenzeka ukuwela ingane okwesibili? imithetho ubhapathizo
Abesifazane ngokuhlakanipha, iseluleko esihlakaniphile kwabesifazane
Izimbangela, izimpawu, nokwelashwa osteochondrosis
Casserole e multivarka "Redmond" - ojiyileyo izithelo sweet